Edward M. Kennedy Academy for Health Careers (11-12 campus) | Boston School Finder
Edward M. Kennedy Academy for Health Careers (11-12 campus)
BPS/Degmada (Jaatarka Horace Mann)11aad - 12aad
110 The Fenway, Fenway
Heer Gobolka: Hormar Ka samaynaaya Yoolalka
Xiliga Biloowga/Dhamaadka 7:30am-2:30pm
Lambarka Taleefanka 617-635-8450
Dhamaan dugsiyada sare ee Boston Public School (BPS) waxay ufuran yihiin arday kasta oo kunool Boston. Aqbalaada ardayda waxaa lagu go'aanshaa diiwaangalin furan, bakhtiya nasiib, codsi, ama imtaxaan. Diiwanagalinta dugsiga waxaa lagu baxshaa hanaan codsi qaas ah. Dhagsii Apply Online si aad ugasho qaybta codsiyada.
Waqtiga Kama danbaysta ah ee Codsiga ladiraayo
Feebaraayo 8, 2019
Machadka Kennedy Academy for Health Careers waa Dugsi sare oo Boston kuyaala oo loogu diyaarsho kuleejka ardayda rabta inay bartaan xirfadaha caafimaadka.= iyo shaqooyinka laxariira. Machadku wuxuu baxshaa bii'o waxbarasho oo taageero leh taasoo kor uqaadaysa qadarinta iyo karaamaynta kaladuwanaanta ardayda. Ardayda ayaa baran doona xirfadaha nolosha ee ay ubaahan yihiin si ay unoqdaan xubno waxsoosaar iyo wanaag kudhex leh bulshada.
dugsiga waxaa loogu magacdaray si loo maamuuso Xubinta Aqalka Sare ee Maraykanka horay uga tirsanaan jiray Edward M. Kennedy.
Waa dugsi sare oo amaan ah oo leh manhaj loogu diyaar garoobo kuleejka kaasoo diirada lagu saaro caafimaadka, xisaabta, Ingiriisiga, Luuqadaha Aduunka, Sayniska, taariikhda, iyo maadooyinka tignoloojiyada.
• Ardaydu waxay khibrado ka qaataan xarunta kuleejka ee jaamacada Northeastern University ardaydeenuna waxay adeegsan karaan shaybaarada sayniska iyo kumbiyuutarada, maktabadaha, iyo adeegyada kale ee jaamacada.
Waa xarun dadyow kaladuwan leh xushmadna ku leh waxbarashada, halkaasoo ardaydu utaagan yihiin inay naftooda guul gaarsiiyaan iyo macalimin aaminsan awooda kujirta arday kasta.
50% oo kamid ah macalimintu waxay labo shahado ku haystaan maadooyinka ay dhigaan.
60% shaqaalaheena macalimiintu waxay hasytaan Shahaadada Barashada Ingiriiska.
Shaqooyinka biloowga ah, adeegyada bulshada, khibradaha shaqada, barnaamijyada xiliga xagaaga ee dajinta adeegyada caafimaadka.
Dugsiga Gaarka loo leeyahay ee Horace Mann, oo leh xoriyad gaar ah oo ay uga qaybgalaan barnaamijyo dhiirigalin leh, dardagalin leh dhanka aqoonta iyo nashaadaad ka baxsan manhajka.
Ingiriiska AP, Bayooloojiga, Xisaabta, Taariikhda, Tirokoobka, Cilmi Nafsiga, iyo Casharada Isbaanish.
Tusmayn iyo taageero gaar ah oo ardayda laga siiyo dhinacyada la xiriira aqoonta, arrimaha shaqsiga ah, iyo kuwa bulsho intaba.
Ururka Maamuuska Qaran, kubada kollayga, orodka, baseball-ka/softball-ka, Kooxda Dooda, Farshaxanka Dagaalada, kubada cagta ee calanka, Naadiga Riwaayada, Gudigga Ardayda, Yearbook, prom, munaasabado bulsho, iyo safaro.
Dhawr katirsan shaqaalaha ayaa shahado kahaysta Golaha Qaranka.
Waxbarashada Gaarka ah iyo Ardayda Barata Luuqadda Ingiriisiga
Dugsigu wuxuu dugsigu u adeegaa dhamaan ardayda lagu qoray nidaamka codsiga qaaska ah.
Taageerooyinka kale ee Dugsiga
Kaalkaaliyaha wakhtiga buuxa shaqeeya
Kalkaaliso saacado kooban Shaqaysa
Shaqaalaha Arimaha Bulshada
37 oo kamid ah48
window.charts.studentDiversity.data = [36.90, 1.00, 56.40, 2.60, , 0.30, 2.90]
window.charts.teacherDiversity.data = [21.60, 1.00, 5.50, 2.00, , , 9.40]
Casharo gaar ah oo bilaash ah ayaa diyaar u ah dhamaan ardayda saacadaha dugsiga kadib ee maalmaha Isniinta-Khamiista, waxaa lagu dhiganayaa udiyaar garoowga MCAS iyo SAT, tababarada xirfadaha caafimaadka, barnaamijyada adeegga bulshada, Ururka harafta Qaranka, barashada dhaqanka
Baseball-ka, Kubadda Kolleyga, Cheerleading, Kubadda cagta, Soosarka, Orodka, Kubada Laliska
Nashaadaadka hogaaminta dhalinta, kulano, dood, riwaayad, EMK TV